Boky Torolàlana: Inona no hatao aorian'ny fametrahana an'i Debian | Avy amin'ny Linux
chuki7 | | Fitsinjarana, GNU / Linux, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Izaho manokana dia nifidy Fitsapana i Debian fa mitovy amin'ny sampana miorina ihany.
Voalohany indrindra, mamporisika anao aho hampidina ny Debian Testing iso avy http://cdimage.debian.org/cdimage/release/current-live/ , ireo farany indrindra dia manome tsy fahombiazan'ny fametrahana miaraka amina rakitra sasany, amin'izao ..., mandra-pandamin'izy ireo.
Raha mila kapila tambajotram-pifandraisana Wi-Fi manokana ny solosainanao dia mila mampidina azy ianao, mila izany amin'ny fifandraisana Internet. Ny tena fahita dia ao http://cdimage.debian.org/cdimage/unoff … /firmware/ , ao anatin'ny fisie "firmware.tar.gz".
Fika kely hametrahana ny Debian Testing dia ny fanaovana azy amin'ny USB-pendrive, noho izany dia mila ilay application "Unetbootin" http://unetbootin.sourceforge.net/, miaraka aminy no maka tahaka ny fisie debian iso amin'ny USB-pendrive . Ampiasao ity boky ity raha mila fanampiana ianao http://www.puntogeek.com/2010/04/28/cre … netbootin/
Aorian'izay dia adikao ny rakitra "firmware.tar.gz", sintomina teo aloha, eo amin'ny USB-stick izay naka tahaka an'i debian ary esory ilay izy.
Ary ankehitriny, afaka manomboka amin'ny solosaina tianao hametrahana debian amin'ny USB-pendrive ianao.
Misy torolàlana be dia be amin'ny fametrahana debian stable na fitsapana, azonao atao ny manandrana ireo, izay mazava tsara:
Fametrahana Debian Squeeze miaraka amina partitions misy encrypt
Vantany vao vita ny fametrahana ary aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny solosaina dia manana debian tsotra sy somary ratsy tarehy ianao. Mampiasa ny tontolo iainana Gnome aho ary tsy tiako ny zavatra kely ka dia nanomboka nanova zavatra iray ahazoana aina aho.
Voalohany indrindra dia nanana Internet aho fa ny fampahalalana dia tsy miseho amin'ny faritra fampandrenesana.
Sokafy ny terminal ary ampidiro ho faka hanovana ny rakitra "/ etc / network / interface" manampy "#" eo alohan'ireo tsipika rehetra.
Ho hitantsika bebe kokoa na latsaka ity noho ny manome toy izao;
Ankehitriny isika dia mitsitsy amin'ny Ctrl + o ary avy eo mivoaka ny Ctrl + x
Mamerina ny tambajotra amin'ny baiko izahay
Mivoaka ianao ary miverina fa raha mbola tsy hitanao dia averinao indray ny solosaina ary ho hitanao fa azonao atao ny manamboatra ny tamba-jotra Wi-Fi avy amin'ny faritra fampandrenesana.
Raha te hikirakira ny rakitra repositories debian avy amin'ny root terminal miaraka amin'ny baiko "su" avy amin'ny terminal:
Izahay manitsy ny andalana teo aloha miaraka amin'ny "#" eo aloha sy eto ambany dia alainay ny lahatsoratra
Manavao miaraka amin'ny baiko izahay
Ary izao dia mitsitsy amin'ny Ctrl + o izahay ary avy eo mivoaka ny Ctrl + x
Raha mampiasa an'i Debian Stable isika dia tsy miova afa-tsy amin'ny hoe "fitsapana" ho "marin-toerana" ary aza hadinoina fa mampiasa ny kinova amin'ny tsingerina ankehitriny misy fanamarihana na milamina isika. Raha ovain'ireo mpamorona ny tsingerina mandalo ny kinova amin'ny fanandramana mankany amin'ny stable, ao amin'ny sampana fitiliana dia tsy dia misy tranga loatra ianao raha manaraka ny fanavaozam-baovao miaraka amin'ny fahita matetika ianao (mijanona ao amin'ny sampana "andrana" foana ianao fa ao amin'ny sampana miorina "miorina "hanana olana ianao satria be loatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny tranon'omby taloha sy ilay vaovao.
Mitandrema amin'izany! Mba hialana amin'izany dia apetraka matetika ny anaran'ny kinova hoe "potsero" ho an'ny tranon'omby ankehitriny sy "wheezy" ho an'ny fitsapana ankehitriny.
Autologin (fidiran'ny mpampiasa mandeha ho azy) dia mahazo aina tsara fa tsy azoko atao ny manamboatra azy amin'ny kaontin'ny mpampiasa ao amin'ny System Settings. Ka tsy maintsy nataoko avy tao amin'ny terminal root tamin'ny fanitsiana ilay rakitra "/etc/gdm3/daemon.conf":
Tadiavo ny soatoavina ary soloina
"AutomaticLoginEnable = true" ary "AutomaticLogin = your_user_name" tsy misy "#" eo alohan
Mitahiry amin'ny Ctrl + o izahay ary avy eo mivoaka amin'ny Ctrl + x
Mamerina ny rafitra izahay
Raha manana Ram ianao, dia azonao atao ny mampiasa kely kokoa ny swap ary misy fironana bebe kokoa hampiasa ilay ondrilahy, izay haingana kokoa, manitsy izahay ho superuser:
Amin'ny faran'ny fisie dia ampio ity tsipika manaraka ity
Mametraka fonosana sy programa vitsivitsy izahay:
Betsaka ny fizarana no tonga amin'ny alàlan'ny "sudo" ho an'ireo asa mitaky alalana amin'ny faka, saingy amin'ny fitsapana an'i Debian dia tsy tonga tampoka izany.
Raha te hampiasa azy izahay dia manoratra avy amin'ny terminal superuser:
Ampiarahinay amin'ny vondrona sudo ny mpampiasa na ny mpampiasa
Raha manana olana amin'ny sudo ianao noho ny fanaingoana azy dia azonao atao amin'ny fomba hafa ity.
Manova ny rakitra fikirakirana sudo amin'ny nano editor izahay
Etsy ambanin'ireto tsipika ireto dia manampy ny mpampiasa anay
Tehirizo ny fanovana ary avereno ny rafitra.
Fomba hafa kanto kokoa ny famoronana vondrona antsoina hoe sudo
Manova ny rakitra fikirakirana sudo izahay
Eo ambanin'ireo tsipika dia manampy ny sudo vondrona
Tehirizo ary avereno ny rafitra.
Hatsarao kokoa ny fahombiazan'ny enta-mavesatra amin'ny fanombohana ny rafitra
Hesorinay ny exim4 sy ny fivoarana napetraka raha tsy misy izany:
Mitandrema, aza manandrana manafoana ny Empathy na Totem amin'ity fomba ity satria hiezaka ny hanala ny gnome-core (fonosana birao gnome misy programa sy tranomboky ilaina)
Esorinay ny gnash (toy ny flashplayer fa maimaim-poana)
Fandaharana ahafahana mamela sy manafoana ireo serivisy / daemons izay mihazakazaka eo amin'ny rafitra ary miaraka amina interface interface.
Raha hampiasa ny interface graphique hamoronana vondrona sy mpampiasa dia tsy maintsy mametraka rindranasa izay tsy apetraka amin'ny alàlan'ny default.
Mba hampiasana ny lohahevitra sy ny kisary, dia nametraka gnome-tweak-tool izahay
Mametraha endrika decompression sy rakitra-roller (manager format format)
Mametraha fanatsarana amin'ny nautilus
Mametraha flashplayer (avy amin'i gnash) ary raha mila izany openjdk-6 (Java)
Mametraka gconf-editor (editor safidy gnome)
Ho an'ny i386
Ho an'ny amd64
Mametraka brazier-cdrkit (add-on ho an'ny brazier)
Ampidiro fotsiny ireo programa ilaina na izay tadiavinao, tiako ny birao feno na dia misy maromaro manao izany aza.
Nametraka Icedove izahay satria nanala ny fivoarana (mpanjifa mailaka kopian'ny thunderbird)
Mametraka Iceweasel (kopian'ny firefox browser) izahay
Mametraha gedit sy synaptic (tonian-dahatsoratra sy mpitantana fonosana "deb")
Mametraka gdebi gthumb inkscape sy parcellite (mpiorina fonosana deb, mpijery sary, mpamoaka sary sary vongana ary mpitantana clipboard)
Mametraha vlc browser-plugin-vlc soundconverter (mpilalao haino aman-jery sy mpanova endrika audio)
Mametraka gnome-player (haino aman-jery hafa)
Mametraha turpial audread bleachbit transmission audacity clementine acetoneiso
(Mpanjifa Twitter, mpilalao audio, mamafa ny angon-drakitra sy rakitra tsy maharitra, mpanjifa BitTorrent, mpamoaka feo, mpilalao mozika tsotra sy maivana, sary ISO ISO
Mametraha catfish hardinfo gufw (mpizaha rakitra, jereo ny fampahalalana momba ny fitaovan'ny rafitrao, interface graphique ho an'ny fitantanana firewall miaraka amin'i ufw)
Mametraka endritsoratra fikandrana
Fitaovana fanarenana rakitra sy fandrosoana fisarahana farany
Fametrahana tranomboky fototra handrafetana sy hamosaviana modules
Fametrahana sensor sensor
lm-sensor dia mametaka ny mpamily ho an'ny sensor sensor ary ny hddtemp ho an'ny kapila mafy.
Mandritra ny fametrahana ny hddtemp, dia hanontany antsika raha te-hihazakazaka ny daemon hddtemp amin'ny fanombohana ny rafitra isika, misafidy YES, ary avelantsika ireo soatoavina tsy misy dikany hafa
Izahay dia manatanteraka ny fahitana ireo sensor amin'ny rafitra
Amin'ny fanaovana an'io dia hanontaniana fanontaniana maromaro isika, tsy maintsy mamaly ENY daholo isika.
Averina atsangana ny rafitra ary hananantsika sy hapetrakay ireo sensor.
Fametrahana divay tsy miovaova, ity no kinova farany fonosana, io no ampiasaiko sy apetrako tsy misy olana.
Avy amin'ity rohy ity dia ampidininao ireo fonosana mifandraika amin'ny kinanao 32bits na 64bits
Adikao ao anaty fampirimana ireo fonosana alaina miaraka amin'ilay anarana tadiavinao, ohatra "tsy mitombina divay", ao anatin'io no manokatra terminal ianao ary manao kopia.
Raha tsy mahomby ny fametrahana ao amin'ny trano famakiam-boky dia ho hitanao izany
Raha tsy te-hametraka divay fanandramana ianao dia ampiasao ilay avy amin'ny tahiry ofisialy
Mamorona mpandefa amin'ny birao
Voalohany dia tsy maintsy manana fitaovana gnome-tweak-napetraka ao amin'ny Gnome Shell izahay ary avy eo dia mametraka tontonana gnome
Ankehitriny isika dia hamorona mpandefa vaovao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ity baiko manaraka ity avy amin'ny terminal eo amin'ny birao:
Mora ... Nooo?
Fako Linux amin'ny fizarazarana NTFS
Raha ny mahazatra dia rehefa mamafa ny rakitra / fisie avy amin'ny kapila / fizarazarana amin'ny endrika Windows NTFS ianao dia tsy mankany amin'ny fako fafafa foana.
Misy hafetsena ka mankany amin'ny fako misy ny mpampiasa anay, manova ny fisie "/ etc / fstab".
Manokatra terminal aloha izahay ary mahazo ny id an'ny mpampiasa anay
Izahay dia mijery ary mahita fa ny fitsipika dia uid = 1000 (mpampiasa) gid = 1000 (mpampiasa) ...
Avy eo manitsy ny rakitra / etc / fstab izahay
Izahay dia manampy ny masontsivana ", uid = 1000, gid = 1000" ao anaty kapila miaraka amin'ny tady ntfs-3g
Tandremo: Alohan'ny hikasihana ny fisie / etc / fstab dia manaova kopian'ny tany am-boalohany ao amin'ny fampirimana an-trano / mpampiasa raha toa ka tsy mahomby aorian'ny famerenana. Ity no fomba ahitanao azy amin'ny cd live.
Vahaolana mety amin'ny pulseaudio amin'ny Debian
Indraindray dia mety hianjera ny pulseaudio.
Nahita vahaolana tsotra aho saingy tsy maintsy holazaina fa tsy mahavaha ny fiasan'ny karatra feo fa ny fanamboarana voalohany ny serivisy pulseaudio ihany.
Avy any amin'ny terminal
Tehirizo ary avereno ny rafitra
Raha ilaina izany dia azonao atao ny mametaka pulseaudio
Mizarà lahatahiry avy amin'ny nautilus, amin'ny maha vahiny na tsy misy teny miafinao.
Mametraka ireo fonosana aloha izahay
Ary avy eo dia averinay ny rafitra
Raha vantany vao tafapetraka ny "samba" ary efa manomboka ny rafitra, dia mety hitranga ity lesoka manaraka ity rehefa mizara lahatahiry avy amin'ny nautilus:
Ny "fizarana tambajotra" dia namerina ny lesoka 255: mpampiasa net: tsy afaka manokatra ny lahatahiry mpampiasa / var / lib / samba / mpampiasahares. Famoahana fahazoan-dàlana nolavina. Tsy manana alalana hamorona mpampiasa ianao. Angataho ny mpitantana anao hanome alalana anao hamorona fizarana.
Tamin'ny debian dia namboariko izy tamin'ny fanampiana ny anarako "ho an'ny vondrona sambashare"
sudo adduser sambasare mpampiasantsika
Avy eo hampavitrika ny boaty fidirana ho an'ny vahiny rehefa mizara fampirimana, manova ny rakitra fikirakirana samba:
Manampy aorian'ny [global]
Ary mba hamaranana dia averinay indray ny serivisy «samba»
Amin'izany dia azontsika atao ny mizara ireo lahatahiry tadiavintsika avy amin'ny nautilus, amin'ny maha vahiny na tsy misy teny miafina antsika.
RAM-disk hanatsarana ny Firefox
Ny hataontsika dia mametraka ny cache firefox ao anaty ramdisk
Izahay dia mamorona ny fampirimana antsoina hoe .RAM amin'ny / antrano / anaranao
Nametraka teboka teo aloha izahay mba hanaovana azy io ho fampirimana miafina
Voalohany, ao amin'ny firefox dia manoratra ao amin'ny bara adiresy "about: config" izahay
Faharoa dia ekenay ny fampitandremana ary apetrakay amin'ny sivana ny "browser.cache"
Fahatelo miaraka amin'ny bokotra havanana, Vaovao / Tady, ary manoratra izahay:
"Browser.cache.disk.parent_directory" ary omenay ny tadiny "/home/username/.RAM"
Mahatsiaro anao aho, tsy misy ny teny nalaina sy ny solonanarana = ny anaranao
Ary farany, amboary ny rakitra sns / fstab
Ary ampianao amin'ny farany ny lahatsoratra
Tehirizo ny rakitra ary avereno ny rafitra.
Amboary ny endritsoratra manjavozavo ao amin'ny Firefox (olana manohitra ny aliasing)
1- Avy amin'ny menio:
Ao amin'ny System Tools-Prefers-advanced setting-Fonts:
Manondro = feno
2- Sokafy ny terminal ary manorata:
3- Atsaharo ny mpampiasa raha ilaina izany.
Mandehana programa 32-bit azo entina amin'ny derivatives debian sy 64-bit
Ny fampidinana fonosana ilaina dia avy any Ubuntu fa tsy misy olana. Izany dia noho ilay kinova izay nanangonana ireo programa izay azonao jerena eto http://portablelinuxapps.org/
Mamoaka sy maka tahaka ny lahatahiry
Avy eo izahay dia manampy ny_ mpampiasa anay amin'ny vondrona fuse
Ary averinay ny rafitra
Mpamily ATI, INTEL ary NVIDA
Eto aho dia ho fohy ..., hehehe; tsara kokoa, vakio ireo rohy.
Manova ny GDM3 ho MDM
GDM3 no mpitantana fidirana gnome (ny efijery an-trano izay anontaniany anao ny solonanarana sy ny teny miafina hidiranao ny rafitra), saingy tsy tiako izany ary aleoko zavatra mitovy kokoa amin'ny GDM teo aloha.
MDM dia mpitantana fidirana Linux Mint Debian izay azo amboarina kokoa, miaraka amin'ny fanohanan'ny lohahevitra ary misy safidy vaovao eo amin'ny efijery fidirana.
Ampidino ireo lohahevitra fonosana mdm mint-mdm
Apetrakao amin'ny gdebi avy amin'ny nautilus. Gdebi dia mety hangataka aminao amin'ny "libdmx1" famakiam-boky ary ekenay. Mandritra ny fametrahana azy dia hanontany anay hoe iza no mpitantana tianay hampavitrika amin'ireo napetrakay ary hitohy amin'ny fizotrany. Rehefa vita dia manomboka indray izahay ary hanana ny efijery fidirana vaovao.
Ankehitriny dia azontsika atao ny manamboatra azy io araka ny itiavantsika azy miaraka amin'ny fitaovan'ny fikandrana fidirana avy amin'ny fitaovam-pitantanana menu-system.
Raha hifanakalo eo anelanelan'ny mpitantana isan-karazany dia mila manisy terminal fotsiny isika:
Raha manome anao tsy fahombiazan'ny fametrahana "mdm" ianao dia tsy maintsy esorinao aloha ny "gdm3" ary avy eo andramo indray ny fametrahana ny "mdm" alohan'ny hamerenanao azy indray.
Na ahoana na ahoana, AZA MORAOTRA raha tsy efa nametraka "gdm3" na "mdm" manager manager fidirana aloha.
Ovao ny fisehoan'ny Gnome 3 (Gnome Shell) hampifanaraka azy araka izay tianao
Ny zavatra voalohany dia ny fanaovana backup amin'ny lohahevitra ankehitriny, izany dia amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny console:
Izay hanokatra ny mpitantana Nautilus ao amin'ny lahatahiry / usr / share / gnome-shell, izay hahitanao ny zava-drehetra momba ny toe-javatra Gnome 3 ho an'ny kaontinao.
Ho hitanao fa misy fampirimana antsoina hoe lohahevitra, izay misy ilay lohahevitra tsy misy fangarony, adikao ity folder ity ary apetaho amin'ny toerana azo antoka.
Tadiavo amin'ny Internet izao ny lohahevitra momba ny Gnome Shell, Gnome 3 na GTK3 (anarana hafa soloana zavatra mitovy daholo) ao amin'ny Deviantart dia afaka mahita sary manintona maro ianao, raha tsy izany, ny fikarohana tsotra ao amin'ny Google dia hitarika anao any amin'ny lohahevitra samihafa. Safidio ilay tianao hapetraka ary alao amin'ny solosainao.
Avy eo miroso amin'ny famongorana ny rakitra lohahevitra amin'ny lahatahiry. Ho hitanao fa ao anatin'ny fampirimana lehibe an'ilay lohahevitra dia misy fampirimana hafa antsoina hoe gnome-shell, ovao ny anarana hoe "lohahevitra".
Vohay indray i Nautilus miaraka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpitantana ao amin'ny lahatahiry misy ilay lohahevitra alaina, ary kitiho raha handika ny fampirimana "lohahevitra" (ilay vao avy nomena anarana). Miverena any amin'ny / usr / mizara / gnome-shell ary apetaho, raha mangataka anao izy hanolo dia valio hoe eny.
Miverina any amin'ny terminal ary mitendry:
Amin'ity fomba ity dia mavitrika ny lohahevitra vaovao.
Mametraka sary masina ao amin'ny Gnome 3
Ny fametrahana sary masina ao amin'ny Gnome 3 dia mora be amin'ny alàlan'ny programa antsoina hoe: Gnome-tweak-tool. Raha hametraka azy io, raha vantany vao manana lohahevitra alaina avy amin'ny tranonkala ianao ary esory, mandehana mankany amin'ny terminal ary soraty:
Avy eo, mandehana any amin'ny lahatahiry lohahevitra mampiasa:
Manokatra tabilao vaovao miaraka amin'ny ctrl + t, izay handehananao mankany amin'ny lahatahiry namahanao namorona ny lohatenin'ny kisary, tsindrio ny kopia ary apetaho amin'ny tabilao hafa (ireo sary famantarana ny rafitra).
Ankehitriny sokafy gnome-tweak-tool ary mankanesa any amin'ny tabilao Interface, izay ahafahanao misafidy ny lohahevitra vaovao ho an'ny sary masina.
Efa manana ny biraonao manokana ianao araka izay tianao.
Raha fintinina, ireto lalana mahaliana ireto dia ireto manaraka ireto:
usr / share / sary …… Ity no làlana ho an'ireo sary masina
usr / share / lohahevitra …… Ity no làlana ho an'ireo lohahevitra
Cryptkeeper dia rindranasa ampiasaina handefasana ireo lahatahiry tadiavin'ny mpampiasa.
Ampidiro ny Java 7 avy amin'ny tahiry
Mety ho an'ny debian 7 izany
Ny olona ao amin'ny Webupd8 dia manolotra repository PPA ho antsika mba hiara-hiasa amin'i Debian ary afaka mametraka Oracle Java 7 (JDK7) isika, izay azo atao satria tsy tena ao anaty tahiry i Java, fa ao kosa ny mpampiditra.
Ny dingana hametrahana ny JDK7 dia manomboka amin'ny fampidirana ny tahiry ao amin'ny lisitra /etc/apt/source.list. Ohatra, azontsika atao ny manamboatra azy io ho faka miaraka amin'ny gedit
Mila manampy ireto andalana roa manaraka ireto isika
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu tena lehibe
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu tena lehibe
Tehirizinay ny fanovana, ary izao dia hapetrakay ny lakilem-bahoaka amin'ity trano fitahirizana vaovao ity ary havaozina ny mombamomba ireo trano fitahirizana.
Ary ankehitriny isika dia afaka manomboka ny fametrahana
Ary efa manana Java amin'ny endriny farany vao haingana isika
loharanom-baovao: http://unbrutocondebian.blogspot.com.es … orios.html
Mametraha firefox 18 amin'ny debian
Misintona avy amin'ny:
Raha vao sintonina dia miditra amin'ny console izahay ary hitady izay misy ilay fisie alaina ary esorinay ity.
Raha toa ka nametraka Firefox isika dia tsy maintsy esorintsika amin'ny root, miaraka amin'ny sasany amin'ireo baiko ireo.
Manoratra amin'ny console izahay ho root:
Mamorona hitsin-dalana izahay. Manoratra ao amin'ny console izahay ho toy ny faka:
Ankehitriny dia afaka mampiasa Mozilla Firefox 18 izahay
loharanom-baovao: http://proyectosbeta.net/2012/11/instal … n-squeeze/
Mametraka Virtualbox 4.2 amin'ny fitsapana
Ampiarahinay ho toy ny faka ny repositories:
Mifidy araka ny fizarana izahay….
Manampy lakile fiarovana izahay
Mametraka ny fonosana "libssl0.9.8" izahay raha ilaina.
Mametraka boaty virtoaly izahay
Raha te hampiasa ireo fitaovana USB ao amin'ny masinina virtoaly dia tokony hapetraka ny fonosana fanitarana arakaraka ny kinova sy fizarana
Rohy an'ny kinova rehetra
Ny kinova virtoaly an'ny virtualbox sy ny fanitarana hatramin'ny androany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Boky Torolàlana: Inona no hatao aorian'ny fametrahana an'i Debian
Ampiasao ny beta4 izay havaozina farany: http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta4
Tsy misy hadisoana ve ilay sary atoro anao?
Heveriko fa raha manana lesoka ianao dia ampiasao ny alpha araka ny voalazan'ny lahatsoratra, dia noheveriko foana fa hadisoako ny tsy nametraka tsara ny firmware.
Raha "MEA GUILTY" ny tsy fanaraha-maso azy io mialoha.
Dikan-teny tsara kokoa http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta4
Fanatsarana tambajotra sasantsasany ho an'ny sysctl.conf:
net.ipv4.tcp_timestamp = 0
Raha te-hametaka readahead-fedora.
Ao amin'ny fstab dia ampio "noatime, sakana = 0" amin'ny fizarana ext3 / 4 hanatsarana ny fahombiazana.
Ary inona no hataony?
Eny, raha ny fandefasana ny masontsivana tambajotra ho an'ny birao, ny masontsivana default dia bebe kokoa ho an'ny mpizara.
Azafady, raha marina ny lahatsoratra, fanontaniana iray: aiza marina no hamahanao ny zip ny firmware.tgz? Manome ahy hadisoana foana aho, ilaiko ho an'ny ethernet Realtek.
Debian mitroka  fa ny mpitari-dalana anao dia tsara, ankamantatra roa mazoto!
 Miala tsiny amin'ny trolling, adidiko isaky ny mahita zavatra mifandraika amin'ny Debian 😀
Distro inona no ampiasainao @msx?
Andohalambo no ampiasainy
Satria ianao dia "miraikitra" amin'ny haavo dia tokony ho namaly "Garch" xD
Tsy torolàlana momba ny zavatra hatao aorian'ny fametrahana debian ity, ity dia mihoatra noho io, distro manokana izy io.
Torolàlana tena tsara, efa novakiako tao amin'ny forum izany ary tena mahaliana.
Misaotra betsaka, angamba amin'ny boaty virtoaly manandrana ny sasany amin'ireo torohevitra omenao 😀
Compa fandraisana anjara mahaliana sy tena tsara, zavatra tsy latsa-danja amin'ny debian.
ahahahah !!! Debian, olom-pantatro taloha. Indraindray aho malahelo ny fitoniany sy ny olany, hehe !!
Ny olan'izy ireo ??
Miarahaba anao KZKG, nanana olana foana aho tamin'ny fametrahana ny wifi (Broadcom 4312), ary tadidiko fa nandany telo andro aho nanandrana namaha izany mandra-pahalehibeko. Ankoatr'izay dia nitady olana aho, satria tamin'ny fitsapana zavatra dia namaky zavatra aho. Raha izany, raha hazavaiko, tsy nilaza fa mieritreritra fa olana i Debian na feno azy ireo. Raha ny hevitro dia mbola io no distro milamina indrindra misy.
Ankoatr'izay, hanampiana fa i Debian no distro izay nianarako betsaka momba ny Linux, ary tsy manam-pahaizana aho, dia mila adidiko betsaka amin'ny zavatra fantatro izany.
manual tsara !!! Tena tsara!
Debian, ny distro tiako indrindra faha-2 aorian'ny Arch, mpitari-dalana tsara
Mamaly an'i scraf23
Salama, manao ahoana ianao, tena tiako ny fomban'ity bilaogy ity, inona ny lohahevitra ampiasainao?
Tsy tena mampiasa lohahevitra mahazatra izahay fa mampivelatra tanteraka an'ity lohahevitra hitanao ity: Link1 & Link2
Hanao fanovana maromaro ihany koa izahay ho an'ny kinova manaraka, rehefa avoakanay ity iray hafa ity dia hataonay ampahibemaso ny kaody ny lohahevitra teo aloha (izany hoe ity hitanao ity): Link
Toro lalana tena tsara, tazomiko izy io sao manapa-kevitra ny hametraka azy aho.
PS: Avy eo hoy izy ireo fa manahirana ny Fedora!
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara, feno sy mahaliana tokoa.
TENA TSARA !!!
nandidy ny salady fampahalalana izay nosoratako hametrahana an'i Debian ianao.
misaotra namana ..
tutorial tsara be !!
Warper dia hoy izy:
Misy ampahany havaozina. tsy misy intsony izy32-libs ho fonosana. Ankehitriny ireo tranomboky 32-bit amin'ny tontolo 64-bit dia apetraka tsy miankina, tsy mamela ny tranomboky rehetra intsony izao
Valiny ho an'i Warper
Navelako izy raha sendra mila olona iray nitana kinova tsy miovaova alohan'ny fitsapana ankehitriny.
Ho an'ny ambiny, tutorial tsara (miala tsiny, tsy azoko ny fidirana)
Mpiara-miasa tsara. Izaho, izay mbola ao anaty diaper miaraka amin'i Debian, dia zavatra tsara toa izao.
Tutorial tsara. Miaraka amin'izany, izay miteny fa tsy sahy mametraka an'i Debian izy dia satria tiany.
Ary ho fanampin'izany dia lazao indroa ny bilaogiko
Voninahitra sy fahafinaretana! Misaotra anao!
Asa tena tsara, tompoko, indrindra rehefa mahita ny tenako ho anisan'ireo bilaogy voalaza aho
Tutorial tsara. Ny hany saingy napetrako dia ny lohatenin'ny fidirana, satria tokony ho toa ilay hoe "Inona no hatao aorian'ny fametrahana an'i Debian (miaraka amin'ny tontolo Gnome)", satria mazava fa ny ankamaroan'ny voalaza dia tsy mihatra fa tsy eo amin'ilay birao ihany.
Jereo eto http://buzon.en.eresmas.com/
Ity rohy ity dia tao amin'ny boky fampianarana, mba tsy hamerina hevitra maro momba ny birao KDE, napetrako izy io. Nanazava tsara ihany koa izy ireo.
Ary ny fomba hijerenao ireo rohy hafa dia misy ihany koa fanazavana maro momba ny debian.
Misaotra tamin'ny mpitari-dalana tsara nohazavaina tsara ho antsika miadana 🙂
Mbola tsy fantatra ve ny daty famotsorana marina ny wheezy?
Rehefa 0 ity isa ity dia mivoaka ny wheezy.
Manana olana momba an'i Wheezy aho ary tsy fantatro raha sendra olon-kafa izany ... ny voalohany dia ny tsy ahafahako mitahiry toerana ao amin'ny GNOME 3 azoko ity hafatra ity GLib-GIO-Message: Mampiasà ny backend GSettings 'memory'. Tsy ho voatahiry na zaraina amin'ny rindranasa hafa ny fikiranao.
ny iray hafa dia olana iray eo an-toerana izay tsy ahitam-bokatra ny kitendry ary miova amin'ny teny anglisy aho ary isaky ny mila mampiasa setxkbmap latam aho mba hamerenako azy amin'ny ara-dalàna
ny bilaogiko: http://www.blogmachinarium021.tk/
Novakiako tao amin'ny bilaogy Yankee sasany fa handeha hatramin'ny faran'ny volana aprily izy ireo - ny fiandohan'ny volana mey
Enrrique dia hoy izy:
Ho an'ny olona normal izay mankafy ny rafitra fandidiana: Ubuntu
Ho an'ny nerd sy antisocial: Debian
Mamaly an'i Enrrique
Ho an'ireo liana liana indrindra dia manasa anao aho hanandrana BSD (FreeBSD, NetBSD ary OpenBSD)
Fanontaniana iray momba ny samba, talohan'ny nizarako fampirimana nizara tao an-tranoko sy ny zavatra nataoko dia ny famoronana rohy mankany amin'izay tiako zaraina ao anatiny, ho an'ny kinova samba izay nataoko tsy nety ity ho fiarovana, mila mandeha any amin'ny smb.conf ianao ary apetraka wide_links = mampandeha na zavatra toa izany fa efa niatrika ny zava-drehetra sy ny tsy misy aho.
Adinoy fa namaha fotsiny aho. https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=92183
Tsara ny mpitari-dalana anao, misaotra betsaka, nanampy be ahy izy.
Namana tena tsara, iray amin'ireo tsara indrindra hitako.
olana fotsiny rehefa manandrana mametraka mdm aho dia milaza amiko fa mifanohitra amin'ny gdm3 fa raha manandrana mamafa uninstall gdm3 aho dia esorina ny gnome?
Tsy manala ny Gnome izy, fa azo ampitaina kokoa noho ny gdm3.
Hahahaha nanangona bilaogera debianeros maromaro hankalazana ny XD.
polisy dia hoy izy:
Ry namana mpandray anjara fatratra…. LEHIBE
Valiny amin'ny polisy
Lahatsoratra tena tsara, tsara fotsiny, ho mora raisina, satria tiako ny manova ny distro lehibe avy any Ubuntu mankany Debian. Misaotra betsaka
mcplatano dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, nanampy ahy in-droa izany ary nianatra zavatra vitsivitsy hanatsarana ny rafitra aho, arahaba!
Mamaly an'i mcplatano
Manana Manjaro Linux napetraka amin'ny solosaina finday aho ary mandeha tsara. Ny solosainako amin'ny birao dia manana Windows, saingy ny zavatra tena ratsy dia tsy mahomby firy, aorian'ny famerenako ny mombamomba ahy rehetra dia mieritreritra ny hametraka GNU / Linux Distribution aho, saingy mbola tsy nanapa-kevitra aho raha ho an'i Debian na i Fedora. Izany no antony andalovako isaky ny tranokala voatokana Linux ary ahazoako hevitra. Fiarahabana avy amin'ny LiveCD.
m4rionet4 dia hoy izy:
Tsy niasa ho ahy ny trano fitehirizana entana, nahazo lesoka aho ... ny lakilen'izany dia tsy niasa tamin'ny muxas ihany misaotra C:
Valiny amin'ny m4rionet4
Salama Heveriko fa ity dia afaka mameno tsara ireo dingana aorian'ny fametrahana an'i Debian Wheezy (ho an'ireo manontany momba ny firefox):
Mamaly an'i matías
Maty dia hoy izy:
Valiny tamin'i Maty
Joselo dia hoy izy:
Salama, sambany aho no manoratra eto, fa efa ela aho no namaky ny bilaoginao, mandra-pahatapitry ny roa taona nampiasana X distro, izay tena tsy mitaraina aho na eo aza ny lesoka indraindray, nety tsara tamiko izany, izaho farany nanapa-kevitra ny hanome The jump to Debian saika nahavitako azy, nanao tutorial be dia be aho, ny zavatra rehetra miasa afa-tsy ny sary famantarana ny tambajotra izay tsy miseho, ary ny zavatra liana indrindra na dia tsy voatonona ao amin'ilay lahatsoratra aza izy io mety hitranga amin'ny olon-kafa mampiditra mpampiasa vaovao, ary ny fanontaniana dia hoe tsy maty ny solosaina, mamerina ... manana birao hp dc7700 aho, nandany fotoana be aho nikaroka ary tsy dia misy raha afaka manome ahy hevitra ho feno fankasitrahana aho. Miarahaba ary mitohy hatrany
Valiny tamin'i Joselo
Salama, salama, avy any Arzantina aho; Vaovao amin'ny Linux aho ary nametraka debian 7 (fahamarinana tena marin-toerana) izao, saingy manana olana roa mila fanampiana hamahana aho:
1- Te hanova ny tontolon'ny gnome aho raha azo atao satria tsy tiako izany, ary tsy haiko ny manao azy. Na farafaharatsiny mba lazao azy ireo ny fomba fametrahana rindranasa ahafahako manova ny lahatahiry toa ny fanovana ny loko volondavenona mahatsiravina ananany. Efa nanandrana nampidina ny lisitry ny loko fampirimana aho fa tsy nametraka ahy avy tao amin'ny terminal. Milaza amiko izy fa tsy afaka mahita ny fonosana sns. (Hitako fa nametraka Kubuntu namako iray ary ohatra dia afaka manova ny lokon'ny lahatahiry izy, manazava azy ireo, raha fintinina zavatra maro)
2- Tsy hitako ny horonantsary facebook alefan-dry zareo amiko satria milaza amiko fa tsy maintsy maka Adobe Flash Player aho; Te hahafantatra izay kinova tokony alaiko ho an'ny linux debian 7 aho sy ny fomba fametrahana azy. Izaho dia manana ny navigateur firefox napetraka.
Fantatro fa ity ho an'ny olona manana traikefa amin'ity rafitra fiasa ity dia zavatra tsy misy dikany fa ho an'ny olona toa ahy izay vao manomboka dia ho tsara tokoa ny info.
Arahaba indrindra, tena tsara ny bilaogy.
Tena mpitari-dalana tena tsara tokoa. Misedra GNU / Linux Debian Jessie aho ary tena mandeha tsara amin'ny solosainako.
­ dia hoy izy:
Misaotra .. Mety tsara ho an'ny Siduction izany: 3
salama manantena aho fa salama tsara ianao =).
Vaovao amin'ny gnu / linux aho, nampiasa varavarankely aho taloha mandra-panandrana fa misy kosa ny consa na dia mamaky aza aho dia very xD, raha azonao atao ny manazava ahy tsara kokoa hoe aiza no hamoahako ny firmware wifi, misaotra anao lehilahy tamin'ny fanoloran-tena = )
Lahatsoratra tena tsara, hanampy zavatra vitsivitsy aho fa tena tsara.
Tokony ahitsinao ity ampahany ity:
ny "install" tsy hita.